Ahoana ny fanesorana ny Internet Explorer 7 | Martech Zone
Ahoana ny fanesorana ny Internet Explorer 7
Alakamisy Oktobra Oktobra 19, 2006 Alakamisy Oktobra Oktobra 19, 2006 Douglas Karr
Misy olona iray taonina manontany momba ny fomba fanesorana ny IE7. Esory ao amin'ny tontonana fanaraha-maso Add / Delete programa. Hamarino tsara fa efa voamarina ny boaty "fampisehoana fanavaozana". Ny zavatra mahaliana dia ny fidirana ao amin'ny Control Panel dia "Windows Internet Explorer 7" ary tsy voatanisa ao ambanin'ny Microsoft na Internet Explorer fotsiny:
Kitiho raha hanao zoma:
Fa maninona no esorinao? Eny… vakio ny farany teny.
Salesforce.com tsy miasa amin'ny Internet Explorer 7 (Tena izany no izy!)
Hitifitra ary hihazakazaka Sabotsy!
20 Okt 2006 amin'ny 2:49 PM
Ianao no maherifoko.